BBC Somali - Warar - Puntland oo xilalkii laga qaaday wasiirro badan
Puntland oo xilalkii laga qaaday wasiirro badan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 September, 2012, 14:50 GMT 17:50 SGA
Madaxweyne Faroole iyo qaar ka mid ah golihii hore ee wasiirrada puntland
Madaxweynaha maamul-goboleedka Puntland, mudane Cabdiraxmaan Faroole, ayaa ku sameeyey golihiisii dawladda isku shaandhayn ballaadhan, isagoo shaqadii ka fadhiisiyey wasiirro hore wax badan ugu soo jirey dawladda.
Xubno badan oo ka tirsanaa golihii wasiirrada iyo wasiir-ku-xigeenno ayaa laga qaaday xilakii ay hayeen, oo qaarkood muddo toban sano ku dhawdhaw ay ka tirsanayaayeen golaha dawladda.
Agaasiimaha guud ee madaxtooyada Puntland, Axmad Caydiid Cusman, ayaa BBC-da u sheegay magacyada masuuliyiinta laga fadhiisiyey shaqadii xilalka wasiirnnimada iyo wasiir-ku-xigeennada , waxanu ku kala sheegay inay kala yihiin wasiirkii warfaafinta Axmad Cali Askar, Xassan Faarax Jaamac, Caasha Geelle Diiriye oo ahayd wasiirkii arrimaha qoyska , Cali Saalax Aadan, Cabdsi Yaasiin Maxamad, Maxamuud Faarax Maxamuud, iyo Faarax Seed Cilmi.
Dhinaca kalena waxa la magacaabay wasiirro cusub oo ay ka mid yihiin Injineer Maxamed Caydiid Ibrahim oo noqonaya wasiirka warfaafinta, Xaliimo Xassan Xaaji Cusmaan oo noqonaysa wasirrka haweenka, iyo Xassan Yaasiin Maxamed oo loo magacaabay wasiirka duulista hawada.
Wasiirkii hore ee duulista hawada Cali Axmad Gamuute ayaa isna loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga. Toddoba wasiir-ku-xigeen oo kale oo cusub ayaa iyaguna la magaacabay oo ka mid noqon doonaa golaha dawladda.
Isku-shaandayntan golaha dawladda ee Puntland ayaa ka danbaysay, dhinaca kale, iyadoo oo dhawaan lagu dhawaaqay in la fasaxay samaynta urur-siyaasadeedyo ka hirgala gobollada Puntland, iyo iyada oo wasaaradaha qaar lagu eedaynayo in beryahan danbe uu habac ku jirey, hawlahooga oo la saluugsanaa.